मधेस आन्दोलन बखेडा मात्र हो : सांसद अन्सारी
जातीय सवालमा राज्य बाँड्दा देश विखण्डन हुन्छ । संविधानले कहाँ कसलाई विभेद् गरेको छ , देखाउन म च्नौती दिन्छु ।
दशक भित्र नेपालका सबै कम्युनिष्टले आफ्नो नाम फेर्ने छन् र आफ्नो धरातलमा आउने छन् : डा यादव
म दावी गर्दै भन्दै छु , आउँदो दशक भित्र नेपालका सबै कम्युनिष्ट भनाउँदाहरुले आफ्नो नाम फेर्ने छन , चोला फेर्ने छन् , आफ्नो धरातलमा आउँने छन् । कुनै पनि कम्यूनिष्ट पार्टी र सिद्धान्तले यो देशलाई उभो लगाउदैन , यो कुरा बुझिराख्नुस् ।
सरकारको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुपर्छ : विजुक्छे
संविधानप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै मधेस आन्दोलन चर्किएका बेला ,आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नु पर्ने बताएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे 'रोहित' विवादमा तानिए । अहिले सरकारले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नु पर्ने बताएर चर्चामा आएका छन् ।
माओवादीले गम्भीर गल्ती गर्‍यो : एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली
सरकारको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बहिरिने निर्णय गरेसंगै नेपालको सत्ता राजनीति पुनः एक पटक तातिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले माओवादीको निर्णयलाई पूर्णरुपमा गलत भनेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसंग गरिएको कुराकानीको छोटो अंश :
अहिले प्रयोग भएका डन्डी , सिमेन्ट , बालुवा र गिटी पूर्णरुपमा कमसल छन् : इन्जिनियर दिनेश चौधरी
दाहाललाई कांग्रेसले विश्वास गर्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ : डा.महत
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कांग्रेस सरकार परिर्वतनको खेल नखेल्ने बताएका छन् । कांग्रेस अहिले सरकारका लागि नहतारिएको उनले दावी समेत गरे । प्रस्तुत छ, सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको केही अंश :
जनताका रायसुझाव शीर्ष नेताले हेरेनन् : शिवचन्द्र चौधरी ,सांसद नेकपा माले
मुलुकलाई अफ्ठयारो अवस्थामा पुर्याईयो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा धेरै चिन्तनमनन् गर्नु पर्ने थियो । यस्ता विषयलाई हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु गलत हो । अझै पनि सचेत नहुने हो भने यसले ठूलोक्षती पुर्याउन सक्छ ।
०६४ सालदेखि सरकारबाट लगातार संविधान उल्लंघन हुँदै आएको छ : सुशील श्रेष्ठ
शेरबहादुर देउवालाई पनि कारवाही हुन सक्छ : एकराज भण्डारी
'मेरो छोरा विपीनलाई बेपत्ता पारियो । उसलाई पक्राउ गर्नेलाई १० लाख दिने तोकिएकै थियो । त्यो रकम तोक्ने भन्ने त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषदको प्रमुख शेरबहादुर देउवा हुन् । मैले आयोगमा उजुरी दिएको भरमा त्यसबेला मेरो छोरालाई पक्राउ गर्ने तत्कालिन डिएसपी विक्रम सिंह थापालाई आयोगले निलम्बन गरेर कारवाही अघि बढाउन सक्छ ? '
८०/८५ प्रतिशत जनताले धर्मनिरपेक्षता राख्नु हुँदैन भनेकै हो : डा. शेखर कोइराला
२०४७ सालको संविधान बनाउने क्रममा बेलायती प्रतिनिधिहरु यहाँ आएका थिए । उनीहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेट्दा धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाएका थिए । तर किसुनजीले तपाईको देशमा क्याथोलिक किन प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर उहाँहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरु जवाफविहीन हुनुभयो ।